FANAFIHAN-DAHALO TAO AMBAHITA BEKILY : Raikitra ny fifandonana, tafaverina ny omby an-jatony
Ny talata hariva hifoha alarobia lasa teo iny, dahalo efa ho 60 lahy no nigadona tao Ambararata Andriambola Avaratra, kaominina ambanivohitra Ambahita, distrika Bekily, Faritra Androy, nikasa handravarava ny tanàna. 8 novembre 2019
Nirongo fitaovam-piadiana marobe, basy sy zava-maranitra ireo olon-dratsy ka tsy sahy nanohitra azy ny mponina. Vokany, omby miisa 119 no indray lasan’ny dahalo. Niezaka namaly ny fokonolona saingy tsy nahatohitra ny fanafihana hatramin’ny farany, hany ka lasan’ny dahalo avokoa ny omby teo an-tanàna. Raha vantany vao nahare izany anefa ny avy ao amin’ny Zandary vondron-tobim-pileovana Androy dia nanetsika avy hatrany ny « 1ère section USAD » izay efa napetraka mialoha tao Isoanala mba hisakana ny kizo tsy maintsy handalovan’ireo dahalo ireo.
Ny alarobia maraina no nifanena tao amin’ny kizo Antsomontsoy, kaominina Isoanala ireo dahalo nitondra ny omby sy ireo zandary USAD. Raikitra ny fifandonana nanomboka tamin’ny fito ora maraina rehefa nanohitra ireo malaso. Nandritra io fisavoritahana io dia tonga koa ny Zandary 25 lahy avy amin’ny « CSAO » Imanombo Bekily mba hanampy ny USAD izay efa miady. Nahomby araka izany ny paikady ka resy tosika ihany ireo dahalo ny farany. Samy nanavotra ny ainy ka nilaozan’izy ireo ny omby halatra izay nentiny.
Tsy nisy ny aina nafoy sy ny naratra tamin’ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona tamin’io fotoana io ary tafaverina amin’ny tompony ny omby miisa 119 sy ondry 05. Ireo dahalo kosa dia nisy ny lavo sy naratra saingy nentin’ny namany nitsoaka. Nahavelom-bolo ny fokonolona tokoa io vokatra io ka samy nidera ny asan’ny zandary ny vahoaka sy ny manam-pahefana any an-toerana. Ho fanatsarana ny fandriam-pahalemana hatrany dia manao fanentanana ny mponina ny mpitandro filaminana amin’ny fiaraha-miasa akaiky.